Thenga i-Bitcoin nge-Ikhadi Lesipho le-Adidas | I-Paxful
Thenga i-Bitcoin (BTC) nge-Ikhadi Lesipho le-Adidas
I-Paxful yenza kubelula futhi kuphephe kuwe ukuthenga nokubamba i-cryptocurrency. Thola umnikelo ophambili ngezansi futhi uthenge i-cryptocurrency nge- Ikhadi Lesipho le-Adidas namuhla.
Isilinganiso Se-Bitcoin Ngayinye
Lapha e-Paxful, umgomo wethu ukwenza izinkonzo zezimali zifinyeleleke ezigidini zabantu emhlabeni jikelele. Sifuna ukunika abantu ithuba lokusebenzisa imali noma kuphi lapho bekubona kufaneleka khona futhi siphucule ukuphila kwabo kwansuku zonke.
Inkundla yethu isebenza ngezimiso zezimali ze-peer-to-peer, ezikuvumela ukuba uthenge i-Bitcoin ngokuqondile kwabanye abasebenzisi abanjengawe, ngaphandle kokuhilela amabhange noma izinkampani. Uzoba yingxenye yomphakathi owakhiwa abasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezintathu, bonke abeze kithi ngomgomo wokufunda ukulawula izimali zabo.
Ukuthenga imali eyidijithali ku-Paxful kulula; vele nje ulandele lezi zinyathelo:
Bhalisa – Vula i-akhawunti ngemva kwalokho uzobe usuthola ngokuzenzakalelayo isikhwama sakho semali samahhala se-Bitcoin.
Thola okuthengiswayo – Lapho usunayo i-akhawunti, khetha indlela yokukhokha, inani le-Bitcoin ozimisele ukulithenga kanye nemali othanda ukuyisebenzisa, yibe usuchofoza okuthi Funa Okuthengiswayo. Bheka ohlwini lokuthengiswayo okukhona, khetha okufanelana kangcono nezimfuneko zakho bese uhlola imigomo yomthengisi.
Qala ukuhweba – Uma wanelisekile yimigomo yomthengisi, faka inani le-Bitcoin ofuna ukulithenga, bese uqala ukuhweba. Lokhu kuzovula ingxoxo ebukhoma nabanye abathengisi. Landela iziqondiso zomthengisi ukuze ukhokhe bese uyakuqinisekisa lokho.
Thola i-Bitcoin – Umthengisi uzobe esekhulula i-Bitcoin iye ngokuqondile esikhwameni sakho semali se-Paxful.
Ungabukela nevidiyo yethu echaza kahle indlela yokuthenga ngokushesha i-Bitcoin.
Ngemva kokuphothula ukuhweba ngokuphumelelayo, ungathumela noma usebenzise i-Bitcoin kunoma yisikhi isikhwama semali noma isevisi kusukela ngqo esikhwameni sakho semali se-Paxful.
Njengoba kunezindlela zokukhokha ezingaphezu kwezingu-300, ukuthenga i-Bitcoin ku-inthanethi kulula ngendlela eyisimanga. Kusukela ekusebenziseni imali engokoqobo kanye nokuthumela ngebhange kuya ekusebenziseni amakhadi ezipho kanye nama-app okukhokha, ungakhetha indlela yokukhokha evumelana nawe. Uma ungayiboni indlela yokukhokha oyithandayo, sitshele futhi sizozama ukukutholela yona.
Hweba ngokushesha, ngendlela ephephile nevikelekile ngemakethe ye-Bitcoin ye-Paxful peer-to-peer. Qala namuhla!